शाहरुख र अमिरलाई पछाडि पार्दै स्टार कलाकारको सूचीमा दीपिका नम्बर वानमा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
शाहरुख र अमिरलाई पछाडि पार्दै स्टार कलाकारको सूचीमा दीपिका नम्बर वानमा
प्रकाशित मिति: ४ पुष २०७५, बुधबार
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोन शाहरुख र अमिर खानलाई पछाडि पार्दै स्टार कलाकारको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेकी छन्। भारतीय फिल्म वेवसाइट आइएमडिबीका अनुसार २०१८ मा एक मात्र सिनेमा प्रदर्शनमा आए पनि दीपिकाले शाहरुखलाई पछाडि धकेल्न सफल भएकी हुन्। शाहरुखसँगै ‘आम शान्ति ओम’बाट बलिउड डेब्यु गरेकी पादुकोनले भारतीय शीर्ष १० स्टार कलाकारको सूचीमा आफूलाई पहिलो नम्बरमा उभ्याएकी छन्।
एक रिपोर्ट अनुसार मंगलबार भारतीय सिनेमा शीर्ष १० स्टार कलाकारको सूची प्रकाशित गरिएको छ। यो सूची अनलाईन आइएमडिबीको सर्वेक्षण रिपोर्टमा आधारित रहेको छ। यो मासिक २५ करोड भिजिर्टस रहेको अनलाइृन सर्वेक्षण हो। यस लिस्टमा शाहरुख दोस्रो र आमीर खान तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। जसपछि क्रमशः ऐश्वर्या राय, सलमान खान, कैटरिना कैफ, कुब्रा सैत, इरफान खान, राधिका आप्टे र अक्षय कुमारको नाम समावेश छ।
आईएमडिबीका अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख नेहा गुरेजाले भनिन्, ‘यस वर्षको फिल्म पद्मावतमा दीपिका पादुकोनले गरेको प्स्तुतिका कारण उनी भारतीय सिनेमाको स्टारको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन्।’
त्यस्तै राधिका आप्टेले पनि यसवर्ष दर्शकमा छाप छोडन सफल भएका कारण उनी पनि यो सूचीमा समावेश छन् भने सूचीको अन्तिम स्थानमा अक्षयकुमार रहेका छन्। दीपिका यसै वर्ष अभिनेता रणवीर सिंहसँग विवाह गरेर थप चर्चामा समेत आएकी छन्।
महिलाका वेदना र माईतीको सम्झनालाई समेटेको अति मार्मिक तीज गीत ‘हे मेरी आमा’ (भिडियो)
काठमाडौं । चर्चित गायक तथा निर्देशक नारायण रायमाझीले तीजको मार्मिक गीत सार्वजनिक गरेका छन् । […]
धुर्मुस-सुन्तलीलाई पनि बुढेशकाल को रहर !
काठमाडौं । कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले पनिले एउटा फेस एपबाट बनाइएको […]
यस्तो जीवनसाथी चाहन्छिन्, अभिनेत्री बेनिशा हमाल
काठमाडौं । म अहिले चलचित्र क्षेत्रमा छु, त्यसैले मेरा हुनेवाला जीवनसाथी मेरो पेसालाई बुझ्ने तथा सम्मान गर्ने […]
खर्चिलो दृश्यको कीर्तिमान : फिल्मको ८ मिनेटको दृश्यको लागि ७० करोड ?
एजेन्सी । बाहुबली फिल्मका स्टार प्रभास र बलिउड नायिका श्रद्धा कपूर एउटै फिल्ममा देखिंदैछन् । भारतीय फिल्म […]
करिनाको आम्दानी एक दिनमा तीन करोड
भारतको डान्स रियालिटी सो ‘डान्स इन्डिया डान्स’को एक एपिसोडका लागि करिनाले तीन करोड रुपैयाँ लिएकी छन्। उक्त […]
काठमाडौं । संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालमा हुने भनिएको आईफा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको […]